easyJet CEO dia milaza izany toa izany
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » easyJet CEO dia milaza izany toa izany
Rehefa mijanona eto ny volony, ary ianao no eto, ahoana no hataonao amin'ny orinasa tsy masiaka toa ny COVID-19 sy ny fiatraikany rehetra amin'ny zotram-piaramanidina nataonao izay efa herintaona mahery izao?
Amin'ny ampahefatry ny 10% ankehitriny amin'ny haavon'ny seza 2019, ahoana ny fahitan'ny CEO ny volana sy volana ho avy?
Ny fameperana ny zotram-piaramanidina dia mampisavoritaka ny mpanjifa amin'ny lafiny iray ary manamby izaitsizy ny mpandraharaha mba hiasa ao anaty tontolo iray izay mampatsiahy lavitra ny zavatra mahazatra rehetra.
Miaraka amin'ny drafitra momba ny fomba fanalana ny fameperana ny governemanta, nilaza i Lundgren fa afaka manantena fahavaratra tsara izy ireo satria tsy fanontaniana momba ny fangatahana izany; izany dia mikasika ny famerana rehetra.
Tamin'ny resadresaka nifanaovana tamin'i Johan Lundgren, CEO jeneralin'ny easyJet, Jonathan Wober avy amin'ny CAPA Live dia nanadihady ny lehiben'ny mpanatanteraka amin'ny raharaham-pirenena manerantany amin'ny COVID-19 sy ny vokany teo amin'ny indostrian'ny fiaramanidina amin'ny ankapobeny ary amin'ny easyJet manokana .
Salama. Faly be aho miarahaba ny lehiben'ny mpanatanteraka easyJet, Johan Lundgren, izay niditra tao amin'ilay orinasa, heveriko fa telo taona lasa izay. Fotoana inona no tsy maintsy niatrehanao an'i Johan. Hanomboka fotsiny aho amin'ny fametrahana fanontaniana kely eny ivelan'ny rindrina. Novakiako, araka ny fikarohana nataoko, nanomboka ny fiainanao tamin'ny naha-trombonista anao ianao, ka heveriko fa efa nanakalo fantsona vy iray ho an'ny iray hafa ianao. Nanontany tena aho raha misy ifandraisany mihitsy ve izany asa voalohany izany amin'ny asanao amin'ny dia.
Oh, fanontaniana tsara izany. Tsy mbola nanana an'io aho. Misy ifandraisany ve ny… Tsia, heveriko fa efa tena tapa-kevitra aho hatramin'ny mbola kely fa te-ho lasa trombonista irery, ary tsy nisy nilaza tamiko marina ny momba ny tsy fisian'ny be fangatahana any soloista trombone, noho izany ny fangatahana sy ny famatsiana, tsy dia zavatra tena nampahafantarina ahy tsara izany, ary jereo, tsy ampy talenta aho. Avy eo, nanapa-kevitra ny handeha hitsangatsangana aho satria tiako ny mandeha, ary tiako ny olona, ​​noho izany dia toa hevitra tsara izany tamiko. Avy eo, niasa tamin'ny alàlan'ny lahasa isan-karazany aho tao anatin'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fandraisana olona, ​​izay nandritra ny fiainako rehetra izao.
Ie. Heveriko fa ny fangatahana trombonista irery dia mbola ambany kokoa noho ny fangatahana fitsangatsanganana an-habakabaka, na dia tena ketraka aza izy ankehitriny. Mitondra antsika amin'ny dia an-habakabaka, mba hahitana bebe kokoa momba ny haavon'ny hetsika ataonao ankehitriny, hoy ianao, vao haingana, fa ny telovolana ankehitriny dia 10% amin'ny haavon'ny seza 2019. Ny telovolana desambra, heveriko fa teo amin'ny 18% n'ny haavon'ny toerana 2019 ianao ary 13% fotsiny ny isan'ny mpandeha. Miaraka amin'ity fahafaha-manana 10% azonao tamin'ny telovolana ankehitriny ity, dia ny haavon'ny mpandeha no antenainao? Avy eo, ny tena zava-dehibe kokoa, heveriko, satria fantatry ny rehetra fa isika amin'ny hidin-trano, ahoana ny fahitanao azy mandroso amin'ny volana sy volana ho avy?
Ie, marina ny anao. Ny tiako holazaina dia milaza izahay fa tsy tombanana ho manidina mihoatra ny 10% amin'ny telovolana ananantsika raha oharina amin'ny ambaratonga 2019. Ny olana anefa dia ny fahatsapana ny dia, miankina betsaka amin'ny fandehan'ny vaovao isan'andro izany. Ary, koa, ny zavatra lehibe indrindra ananantsika ankehitriny dia, mazava ho azy, ny fameperana napetraka mba hifehezana ny areti-mifindra. Ny iray amin'ireo zava-tsarotra tsy maintsy atrehin'ny tsirairay rehefa ao amin'ity indostria ity ianao dia ny tsy itovizan'ny fameperana ireo arakaraka ny fahefana, ka manjavozavo ho an'ny mpanjifantsika amin'ny lafiny iray ary manamby izaitsizy ny mpandraharaha. zavatra rehetra izay mampatsiahy anao ny toe-javatra mahazatra.
Noho izany, mila miovaova be amin'ny lafiny fandrindrana ny fahaizantsika isika, saingy ny habetsany dia tena kely dia kely ary ny habetsany izay misy any dia ny sidina an-trano indrindra. Tena kely dia kely ny sidina iraisam-pirenena any. Tsy nanombatombana izahay fa hisy be dia be ny sidina amin'ity telovolana ity rehefa hitanay hoe taiza no nitrangan'izany talohan'ny Krismasy, fa ny tena zava-dehibe dia ny hivoahan'ny governemanta drafitra momba ny fomba ahatongavan'izy ireo esory ireo famerana efa napetraka ireo, mba hahafahantsika manantena fahavaratra tsara satria fantatsika fa misy ny fangatahana ao anatiny. Tsy fanontaniana momba ny fangatahana izany. Izany rehetra izany dia mikasika ny fameperana efa napetraka. Mazava ho azy fa izany dia vokatry ny areti-mandringana, izay takatsika tsara fa ny laharam-pahamehana voalohany eto.
Eurocontrol, mpitantana ny tamba-jotra, dia namoaka tranga fifamoivoizana tato ho ato izay milaza fa, na dia amin'ny volana Jona aza, ny fifamoivoizana amin'ny isan'ny sidina, fa tsy hoe tsy mitovy amin'ny isa ny seza, dia hidina eo anelanelan'ny 55% sy 70% amin'ny ambaratonga 2019 tamin'ny Jona. Raha mbola miresaka sidina mihena be isika amin'io dingana io, tiako holazaina, aiza no ahitanao azy aorian'ny volana Jona? Hiverina any amin'ny… Hiverina amin'ny 2019 ve isika, fa aiza ianao no miverina amin'ny toe-javatra mety indrindra?
Jereo, heveriko fa misy scenario maromaro any, fa aleo hazava tsara. Tsy misy mahalala. Tsy misy mahalala raha ho mihoatra na latsaky ny sasany amin'ireo statistika lazainao ireo. Mazava ho azy, mahaliana ny mijery ireo tranga, ary ny sasany amin'izy ireo dia mifototra amin'ny fiheverana misy ifotony izay mety ho marina, saingy ny zava-misy dia mety hiova izany ao anatin'ny herinandro vitsivitsy. Raha tohin'ny fanatontosana ny fandaharan'asan'ny fanaovana vaksiny, dia manomboka misy vokany tsara kokoa noho ny noeritreretina dia azo esorina aloha ny fameperana. Avy eo, heveriko fa handeha… mety ho fiakaran'ny vidim-piainana satria fangatahana lalina sy tsy azo ihodivirana no misy eo, saingy ny zavatra tsy misy mahalala hoe ho toa inona na dia ity aza ao anatin'ny herinandro, aza maninona izay hitranga amin'ny volana Jona ity.
Saingy miabo amin'ny fahavaratra mahery aho raha mahomby ny fandaharan'asan'ny fanaovana vaksiny, raha miasa amin'ny karazany izany, raha miasa amin'ny mutation izay misy izy, dia fantatsika fa misy filàna maika maika ho an'ny governemanta hanala ireo fameperana ireo . Aza adino koa fa misy firenena maro dia maro miankina amin'ny fizahan-tany, ka io no iray amin'ireo laharam-pahamehana azon'izy ireo amin'ny fomba azo antoka ahafahany manidina sy mandeha mandeha indray. Mihevitra aho fa afaka gaga be isika raha misy ny fitohizan'ny fandaharan'asan'ny fanaovam-baksiny.
Heveriko fa ny vola madinika misy sisiny roa ho an'ny olona toa anao, satria Pan-European ianao, miasa amin'ny firenena maro ianao, fa noho izany dia manana fotoana bebe kokoa noho ny zotram-piaramanidina tena mifantoka amin'ny fisidinana voalohany amin'ny firenena iray ianao, fa ianao tsy maintsy miatrika ambaratonga tsy azo antoka bebe kokoa amin'ny fihetsiky ny governemanta samihafa manoloana izany rehetra izany. Ny fandrarana ny dia tsy mbola voarindra mihitsy. Ny fandrosoan'ny vaksiny dia amin'ny fe-potoana hafa any amin'ny firenena samy hafa, ary na dia nanao fandrosoana lehibe tamin'ny fanaovana vaksiny aza ianao, dia mety hanapa-kevitra ny firenena hitandrina ny fameperana amin'ny dia satria tsy nanao fandrosoana mitovy ny firenen-kafa. Ahoana no hanombohanao handamina ny tamba-jotra amin'ny toe-javatra toy izany?
Fantatsika fa, ohatra, raha misy fahasamihafana lehibe eo amin'ny firenena, ary hisy ny fameperana izay henjana kokoa sy mafy kokoa amin'ny firenena iray avy amin'ny firenena iray hafa, ny hakanton'ny fananana kaompaniam-pitaterana dia afaka mamindra ny fanananao. Afaka manidina amin'ny toerana samihafa ianao. Azonao atao ny manidina any amin'ny toerana misy ny tinady. Heveriko fa ara-drariny ny milaza fa ny famantarana voalohany ny fangatahana hitantsika mandritra ny fahavaratra dia any amin'ireo toeram-pialantsasatra lehibe sy fialantsasatra nentim-paharazana, izay ahitan'ny olona fa misy fotodrafitrasa napetraka sy ny sisa, fa raha mihidy ny sisintany iraisampirenena , tsara, avy eo dia hifantoka bebe kokoa amin'ny ao an-trano izy, ohatra. Ny tiako holazaina dia hoe afaka jerenao indray mandeha… Toy ny nolazaiko dia tranga iray io.
Tsy midika izany fa mety hitranga angamba ny fahitanao sidina an-trano matanjaka be. Raha mijery ny zavatra efa nataontsika androany isika, avy amin'io 10% io, ary hatramin'ny 10% noresahintsika tamin'ny telovolana, dia ny UK eto an-toerana indrindra, ny eto an-toerana frantsay, ary ny ao an-trano any Italia. Tena kely dia kely no mandeha amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Mazava ho azy, raha misy firenena mahatsapa fa mahafehy azy ireo izao nefa manapa-kevitra ny hametra ny fivezivezena amin'ny dia iraisam-pirenena, dia hita taratra ao amin'ny programa izany. Noho izany, nanao scenario maromaro izahay, ary te hiandry ela araka izay tratrany alohan'ny hanombohana azy ireo, ary hamidy azy ireo, ary hampiakatra ny ekipa, ary manomboka mijery ireo fahaiza-manao mifanohitra amin'izany fangatahana izany satria raha mbola afaka mahazo ny vaovao farany amin'ny fameperana isika satria ny fameperana no tena, tena lakileny eto.
Page 1 ny 5 Prev Manaraka
Ny famandrihana Airbnb dia nahatratra 70% amin'ny ambaratonga mialoha ny areti-mifindra, tafakatra 23%
CruiseTrends: Ireo sambo fitsangantsanganana miaraka, miorina amin'ny cabins marobe no angatahina